Mukhtaar Roobow oo dagaalka uga adkaaday maleeshiyaadka Alshabaab | TOP NEWS
Mukhtaar Roobow oo dagaalka uga adkaaday maleeshiyaadka Alshabaab
By Tifaftiraha Somalida Maanta on August 12, 2017 No Comment
Xaalada degaanka Abal oo ka tirsan gobolka Bakool ayaa saakay degan kadib markii shalay Dagaalyahano ka tirsan ururka Al-shabaab ay mar kale weerar ku qaadeen wadaadka gooni u goosadka ah ee lagu magacaabo Sheekh Maqtaar Roobow Cali (Abuu Mansuur).
Saraakiil ka tirsan Ciidanka Xoogga dalka iyo saraakiil kale oo oo ka tirsan Ciidanka Koonfur Galbeed ayaa waxa ay sheegeen in Dagaalkaasi khasaare xoogan lagu gaarsiiyay ururka Al-shabaab, iyaga oo sidoo kale sheegay Dagaalkaasi in lagu dilay xubno ka tirsan Shabaab.
Taliyaha Ciidanka Xoogga dalka ee gobolka Bakool Korneel Maxamed Xasan Timacade ayaa sheegay in ay aad uga warhayaan dhaq dhaqaaqyada kala duwan ee ururka Al-shabaab ay ku doonayaan in ay gacanta ugu dhigaan Abuu (Mansuur).
Korneel Maxamed Xasan Timacade Taliyaha Ciidanka Xoogga dalka ee gobolka Bakool ayaa sidoo kale sheegay Ciidamada in ay qabaan amar buuxa oo ku aadan in ay u gurmadaan Sheekh Muqtaar Roobow Cali (Abuu Mansuur).
“Dagaalkaas Abal wuu jiraa, beryahan nimankan khawaarijta ah waxa ay isku soo aruursanayeen degaanka Labaatan jirow, dhaq dhaqaaqoodana waan la soconaa, Muqtaar Roobow Shabaab ayuu ka mid ahaa balse wuu ka goostay, anaga amar waxaan u qabnaa hadii ay Dagaal ku soo qaadaan inaan u gurmano”. Ayuu yiri Korneel Timacade.
Wararkii ugu dambeeyay ee laga helayo degaankaasi ayaa waxa ay sheegayaan in Shabaabkii weerarka soo qaaday ay dib ugu laabteen degaanka Labaatan Jirow oo markii hore ay ka yimaadeen.
Mukhtaar Roobow oo dagaalka uga adkaaday maleeshiyaadka Alshabaab added by Tifaftiraha Somalida Maanta on August 12, 2017